कलियुगका कुरा: राती बसले पार्दियो अलपत्र
राती बसले पार्दियो अलपत्र
रात्रीबसमा चक्रपथ घुम्ने लक्ष्य तीन चौथाई बाटो यात्रा गरेपछि रोकियो। साँझ ८ बजेपछि चल्ने गाडी राती ११ बजेपछि चल्दोरहनेछ। बाटामा अलपत्र परेपछि ४ किलोमिटर हिंडेरै घर आइयो।
हुन त, ११ बजेसम्म मात्र चल्ने भनेकै थिए।आँफै ढिलो चढियो भन्न पर्ला। सामाखुशीबाट एक राउन्ड लगाउने भनेको तर कलकी पुग्दा नै ११ बज्यो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले यातयात व्यवसायीलाई तीन महिनाको लागि ४५ लाख रुपैयाँ दिएर राति चल्ने बसको प्रवन्ध मिलाएको हो । तर यो रात्रिबसमा चढ्दा आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भनेर चाहिँ पहिल्यै सोध्न बिर्सन भने हुन्न। नभए दु:ख पाइने रहेछ।
रात्रीबसले साँच्चै सहज बनाउने हो भने कति बजे कुन ठाउ पुग्छ भन्ने कुरा निश्चित हुनपर्छ। नत्र त कुर्दाकुर्दै आउन्न कि भन्ने डर।
बसमा प्रहरी हुने रहेछन् दुई जना। हामी चढेको रिङरोड घुम्नुपर्ने बस राति ११ बज्न लागेपछि बल्खुबाट कंलकी जानुको साटो सुरक्षाकर्मीलाई छाड्न कालिमाटी पुग्यो हामी चढेको बस। अनि कालिमाटीबाट रबिभवन हुँदै कलकीं गयो बस।
अचम्म चाहिँ हामी जस्तै अनुभव लिउँ भनेर गाडीमा चढ्ने अरु पनि थिए। कोही कोही त मोटरसाइकल बाटामा छाडेर हेल्मेट सहित रात्री बसमा चढेका थिए। धेरै बस त त्यही दिउस चल्ने बस नै रहेछन्। मैले त नयाँ बस होला भन्ने सोचेको थिएँ।
हामी चढेको बसमा माइसंसारका ब्लगर सालोक्यले खिचेको यो फोटो चाहिँ गजबकै छ।
फोटोमा 'महिला आरक्षित सिट'मा पुरुष पुलिस अनि 'फस्ट एड बक्स'मा टुथपेस्ट र ब्रस छ।
· · @dipakbhattarai on Twitter
Tilu Sharma, Khagen M. Kerung Yakthungba and 33 others like this.
Dipak Parajuli · 15 mutual friends
Ha ha , runu parne kuraharu pani rahechan
August 19 at 8:40am via mobile ·
Prem Bahadur Rai Hahahahahahaha
August 19 at 8:42am via mobile ·
Sunita Giri buy why you wanted to do this on night bus only ? cant you do this on micro-bus on day time ?
August 19 at 9:10am ·
Dipak Bhattarai ‎Sunita Giri यसो शहरमा चलेको रात्रीबसको अनुभव लिउँ न भनेर।
August 19 at 9:18am ·
Sunita Giri I just read it here
August 19 at 9:22am ·
Surya Sedai T T Fissssss !
August 19 at 11:56am via mobile ·
Prem Nepali hahaha...
August 19 at 4:51pm ·
Prakash Shah be positive of what u have achieved .....it's better than nothing...
August 19 at 6:58pm ·
Purushottam Bohara रातको ११ बजे सम्म मात्र चल्ने बस कसरी रात्री भयो? यसलाई त सन्ध्याकालिन सेवा भनिनु पर्छ ,हा हा हा हा ......
August 19 at 7:40pm ·